सानिमा जनरलको आइपीको बिक्री खुला, कत्ति कित्ता भर्नु उपयूक्त ! : Himali Khabar
सानिमा जनरलको आइपीको बिक्री खुला, कत्ति कित्ता भर्नु उपयूक्त !
काठमाडौं, २१ असोज । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आइपीओ आजदेखि बिक्री खुला भएको छ । सानिमाले ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता आइपीओ जारी गरेको हो । त्यसमध्ये १ लाख ५० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष र १ लाख २० हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुटयाएको छ। बाँकी २७ लाख ३० हजार कित्ता सेयरका लागि सर्वसाधरणले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीको आइपीओमा असोज २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त अवधिमा बिक्री नभएमा कात्तिक ६ गतेसम्म बिक्री खुला हुनेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० देखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यो आइपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले मध्यम अवस्था अर्थात औसत जोखिम जनाउने केयर एनपीबीबी प्लस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । आइपीओपछि चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ ।
कत्ति कित्ता भर्ने
यतिबेला समग्र सेयर बजारमा चमक आइरहेको छ । प्राथमिकसहित दोस्रो बजारमा समेत लगानीकर्ताहरु उत्साहित भइरहेको देखिन्छ । त्यसमाथि पनि दोस्रो बजारमा बिमा कम्पनीहरको सेयर भाउ तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेको छ । यसअघिका आइपीओहरुमा मागभन्दा निकै बढी गुणा आवेदन परेका छन् । त्यसले गर्दा १० कित्ताका लागि मात्र आवेदन दिए पुग्ने देखिन्छ । यसअघिका आइपीओहरुलाई आधार मान्ने हो भने त्यती सेयर पाउन पनि भाग्यकै भर पर्नुपर्नेछ ।
अजोड इन्स्योरेन्सको शेयर सूचीकरण गरिने